Duuti sababa Covid-19 State Siouxland sadii keessati gudattaa Deemu jira. | KWIT
Oromo News 12.02.20
Nebraskaa seaati 24 keessati namni qabame 62 yoo tau walii galatti kan qabame ammo 2000 ol dha.
South Dakota keessati namni qabame 1,300 yoo tau namni duemmoo Kara 1000 tokkoo siiqu deemu jira. Sababa dhukubicha namni 47 dabalataan duani jiru, akka dhukubni jalqabanee guyyaa tokkoti namni kun marti galmaahun yeroo jalqabaatifi.
CDC akka jedhetti state Rushmore torbaan tarte keessa namamni due baaye akkka tae galmeesite jirti.
Iowa namni waliiglatti due 22 maxansite jirti, kun guyyaa sadaffaa nama guyyaa duan 20 ol akka te kan himuu yoo tau akka state guututi namni waliigalatti due 2,449 dha kan haarawa qabame ammo 3,000 dha.
Jirraatonni Iowa 84 kan Counties 99 keessa jiraatan qorannoo guyyyaa 14 keessa godhamu martuu parsanti 15% oldha, Ida County yeroo ammaa irrati parsanti 29% tokkofaa irra kan jirtuudha.. Woodbury County 18.8% yoo tau guyyaa kaleessa osoo itii hin dabalamin.
Hospitaala keessa galuu akka Iowatti akkuma gudatte jira, nama 102 kan MercyOne fi Unity Point-Health St. Luke’s dha. Kunis lakkoofsa guyyaa kaleessan tokko. Data State akka mullisutti dhukkubsatooni akka biyyati guututi 181kan mullisudha, seaati 24 keessati baaye olgudatte jira.
Nebraskan talaali corona virus torbaan lama keessati jalqabaan kan argattu ta’a yoo qorichi federal fedhatamaa kan injifatu tau.
Governor Pete Ricketts akka jedheti ogeeyani fayyaa jalqabati kan argataniidha general public hanga April hin arggatani.
State officials akka jia kan dhumatti talaali 100,000 ol galchu karoora baafate.